DEG DEG: Itoobiya oo ku dhawaaqday qabashada xubno katirsanaa DAACISH.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Taliska guud ee ciidamada Difaaca dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in ay qabteen qaar kamid ah ama dad ka tirsanaa kooxda la baxday dawladda Islaamiga ah ee loo yaqaano ISIS, kuwaas oo dhawaan ku hanjabay in ay falal Argagixiso ka geysa doonaan gudaha dalka Itoobiya.
Sidda laga baahiyey warbaahinta dawladda Itoobiya waxaa la qabtay oo la xiray qaar kamid ah dagaalamayasha kooxdaas oo isku dayay in ay falal amaan darro ka geystaan gudaha Itoobiya, waxaana ay hadda sugayaan in maxkamaddaha la horgeeyo.
Taliye kuxigeenka guud ee ciidanka Itoobiya ahna Madaxa Howlgalada Jeneraal Berhanu Jula ayaa warkan shaaciyey, wuxuuna sheegay in ay wali dabagal ku hayaan wararka iyo arrimaha la xariira kooxdan oo dhawaan hanjabaad u dirtay Addis Ababa.
Jeneraal Berhanu wuxuu sheegay in ay ciidamada Qaranka Itoobiya ka shaqeynayaan sidii looga shaqeyn lahaa nabadgalyada dalka, isagoo sheegay in ay wax kasta oo dhibaato ah ka hortagi doonaan oo ay gacan bir ah ku qabanayaan.
Madaxa howlgalada ayaa sheegay in ay marar badan kooxdan ISIS isku dayday in ay ficilo ka fuliso gudaha Itoobiya, oo ay dib u soo galiyeen gudaha dad lasoo tababaray, kuwa la shaqaaleysiiyey iyo xataa agabyo kala duwan oo ay hayaan ciidamada Amnigu kana hortageen.
Wargeyska New Age ee kasooo baxa Addis Ababa ayaa daabacay wareysi dheer uu layeeshay Taliye kuxigeenka ciidamada Itoobiya oo shaaciyey in ay dabagal ku hayaan wax kasta oo la xariira macluumaadka kooxaha Argagixiso.
Kooxda la baxday dawladda Islaamiga ah ee ISIS waxay dhawaan shaacisay in ay weeraro ka geysan doonto gudaha Itoobiya, taas oo loo arkayay khatar weyn oo gobalka kusoo siyaaday, balse ma jirin jawaab rasmi ah oo ay dawladda Addis Ababa ka bixisay arrimahan, inkastoo qabashada iyo dhawaaqa cusub ee ciidamaddu uu hadda daaha ka rogayo in kooxahaas la fashiliyey.